‘Liyehla izinga lokusebenza kobuchopho koke waba leCorona’ | uMthunywa
‘Liyehla izinga lokusebenza kobuchopho koke waba leCorona’
14 Oct, 2021 - 00:10 2021-10-13T21:11:22+00:00 2021-10-14T00:05:58+00:00 0 Views
ABACWANINGI bakhathazekile ngempumela yocwaningo olubheka ukuthi kwenzakalani emzimbeni wezigulane ezike zahlaselwa yiCorona ngokuhamba kwesikhathi.
Ucwaningo lwenziwe e-UK kusetshenziswa imininingwane yocwaningo oluke lwenziwa ngaphambilini olukhangela ukuthi ingqondo itshintsha njani ngesikhathi umuntu ekhula. Abacwaningi bebethatha izithombe zabake babanjwa yiCovid-19 abaleminyaka eyehlukeneyo bese beqathanisa lemiphumela yalolu cwaningo olwaphothulwa ngo-2014.
Abacwaningi kulolu cwaningo oluqhubekayo bebekhangela ukuthi umzimba utshintsha njani kumuntu oke waba lomkhuhlane weCorona. Impumela yesikhatshana ekhitshwe ngenyanga edluleyo iveza ukuthi bathole ukuthi liyehla izinga lokusebenza kobuchopho bomuntu oke wahlaselwa yiCovid-19 uma eqathaniswa lalingana laye ongazange abe legcikwane leli.
Ngokocwaningo kuphela izinyanga oke wahaqeka izinga lokusebenza kobuchopho bakhe lehlile okwamanje abacwaningi abakwazi ukuthola ukuthi kuba yisikhathi esingakanani ngoba ucwaningo lulezinyanga ezingu-18.
Okukhathaza abacwaningi yikuthi lokhu kuzaba lomthelela omubi ongenza ukuthi abantu baguge ngokuphangisa kukanti sikhona isikhathi esithile esaziwayo sokuthi ubuchopho bomuntu behlelwe izinga lokusebenza ngoba esekhulile.
Abacwaningi bathi uma beqhubeka lalolu cwaningo lwabo bakhangela ukuthi ngabe kutsho ukuthi abantu abasesigabeni esiphakathi sokukhula lasebekhulile bangazithola kuphazamiseka ukusebenza kobuchopho babo bafane labantu abadala kulabo.
Lolu cwaningo luveze ukuthi ingaphambili yobuchopho lengxenye ebizwa nge-temporal lobes iyancipha kubantu abake bahaqwa iCovid-19 kanti kubantu abangazange bahanqeke ayinciphi ize inciphe uma sebesesigabeni esithile seminyaka okuhambisana lokukhula kwabo.
UDokotela Mike Dow ongomunye wabacwaningi uthe njengamanje abacwaningi babheka ukuthi ngabe lemiphumela ichaza ukuthi abake bahaqwa yiCorona bazaphathwa yisifo sabantu abadala i-Alzheimer ngoba lesi sifo senza ukuthi umuntu omdala akhohlwe masinyane futhi angabuzwa ubumnandi bento ayidlayo okuthiwa kwenzeka uma kuncipha lezi zingxenye zobuchopho kanti zingezinye zezimpawu zeCorona.
“Lokhu kutsho ukuthi kwabanye noma ingasekho iCorona emzimbeni kodwa bayaqhubeka bakhohlwe futhi bangezwa ukuthi into abayidlayo injani,” kutsho yena.
Udubula abulale ubaba wedlalicatsha lomk...14 Oct, 2021